Indlela yokubonisa okanye ukufihla iZandiso zegama lefayile Windows 10
Ukuba ujonga iifayile zakutshanje kwikhompyuter yakho Windows 10 kwaye awukwazi ukubona ixesha kunye nezimamva ezibhalwe ngoonobumba abathathu bamagama efayile (njenge .txt kunye .tif kunye .jpg), sukuphakuzela! Ungabonisa okanye ufihle ulwandiso lwegama lefayile kwintando yakho ngeWindows 10. Kufuneka uxelele nje Windows 10 ukubabonisa - ngombane unkqonkqoze iWindows ngentloko, ukuba uyafuna.
Yonke ifayile inegama. Phantse yonke ifayile inegama elijongeka ngaphezulu okanye ngaphantsi ngoluhlobo: Elinye iGama okanye elinye.
Inxalenye ekhohlo kwexesha - Elinye iGama okanye elinye, kulo mzekelo- ngokubanzi likuxelela into malunga nefayile, nangona inokuba yinto engacacanga okanye engacaciswanga, kuxhomekeke kulowo ubize le fayile. Inxalenye esekunene kwexesha-ext, kule meko-ligama lefayile ulwandiso, umxholo wale diatribe ethile.
Izandiso zegama lefayile bezikho okokoko i-PC yokuqala yavela kwindawo yokuqala. Bayinxalenye yelifa lePC ngaphambi kokuba nabani na akhe athethe ngelifa. Umntu othile, kwenye indawo uthathe isigqibo sokuba iiWindows azisayi kuphinda zibonise izandiso zegama lefayile. (Uqikelelo lwam kukuba uBill Gates ngokwakhe wenza isigqibo, malunga neminyaka engama-20 eyadlulayo, kodwa kukuqagela nje.) Izandiso zegama lefayile zithathwa njengezinobungozi: zinzima kakhulu kumsebenzisi oqhelekileyo, isuntswana lobuchwephesha be-arcana ekungafuneki ukuba ii-novices zibile .
Akukho zandiso zegama lefayile? Inkunkuma leyo. Inkunkuma echanekileyo, engangxengwanga.
Inyani yile yokuba phantse zonke iifayile zinamagama anjengeleta kuMama.docx, iiProjekhthi zezeMali.xlsx, okanye ILOVEYOU.vbs. Kodwa Windows 10, ngaphandle kwenqabileyo, ikubonisa kuphela indawo yokuqala yegama lefayile. Isika ulwandiso lwegama lefayile. Ke uyabona ileta eya kuMama, ngaphandle kwe .docx (ephawula ifayile njengoxwebhu lweLizwi), iiProjekhthi zezeMali, ngaphandle kwe .xlsx (isibonelelo esifileyo sokunikwa ispredishithi se-Excel), kunye ne-ILOVEYOU, ngaphandle kwe .vbs (eyi ulwandiso lwegama lefayile yeenkqubo zoBoniso oluSisiseko)
Kuyacaphukisa xa Windows 10 ufihla ulwandiso lwegama lefayile, ngenxa yezizathu ezine ezinkulu:
Ukuba ubona ulwandiso lwegama lefayile, ungahlala ufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwefayile onayo kwaye yeyiphi inkqubo eza kuyivula. Abantu abasebenzisa iLizwi 2003, umzekelo, banokudideka xa bebona ulwandiso lwegama lefayile .docx - elenziwa ngeLizwi 2010 kwaye alinakuvulwa ngethambo Ilizwi 2003 .
Intsomi ithi owayengumphathi we-Microsoft (kunye nomnini stockholder omkhulu ngoku) uSteve Ballmer wayekhe wasulela i-CEO yangaphambili (kunye ne-philanthropist extraordinaire yangoku) i-PC ka-Bill Gates ye-Windows esebenzisa isincamathiselo esibi se-imeyile, ILOVEYOU.VBS. Ukuba uBallmer wayeyibonile .VBS ekupheleni kwegama lefayile, ngokungathandabuzekiyo wayeza kuqikelela ukuba yinkqubo- kwaye ngekhe ayithande ukuyicofa kabini.
Phantse akunakwenzeka ukuba iiWindows zitshintshe izandiso zegama lefayile ukuba awukwazi ukuzibona. Yizame.
Iinkqubo ezininzi ze-imeyile kunye nabalwi bogaxekile bayakwalela ekuthumeleni okanye ekufumaneni iintlobo ezithile zeefayile, ngokusekwe kwigama labo lefayile. Eso sesinye sezizathu zokuba abahlobo bakho bangabinakho ukuthumela i-imeyile kwiifayile ezithile kuwe. Zama nje i-imeyile ifayile ye .exe, nokuba yintoni ngaphakathi.
Ungqubeka kwigama lefayile elandisiweyo nangona kunjalo. Nokuba iMicrosoft inzima kangakanani na ukufihla izandiso zegama lefayile, ziyavela naphi na - kwiifayile zeReadme.txt ezichazwe kaninzi kumaxwebhu asemthethweni kaMicrosoft kwiingxoxo zefayile.
Thatha amavili oqeqesho, kulungile? Ukwenza Windows 10 bonisa igama elandisiweyo lendlela ngendlela elula, landela la manyathelo:
Kwibar yomsebenzi, cofa i icon yoMhloli weFayile.
Umhloli weFayile iyavela.
Ezona folda zisetyenziswa rhoqo kunye neefayile ezisandula ukufumaneka, eziboniswe nguMhloli weFayile.
Cofa okanye ucofe Jonga.
Uyabona Ifayile yoMhloli Jonga iribhoni.
Yenza iWindows ikubonise izandiso zegama lefayile.
Khetha ibhokisi yeZongezo zegama leFayile.
Ngelixa ulapha, unokufuna ukutshintsha olunye useto. Ukuba ungasiphepha isilingo sokucima okanye ukunika igama kwakhona iifayile ongaziqondiyo, khetha ibhokisi yezinto ezifihliweyo. Ngale ndlela, Windows 10 iya kukubonisa zonke iifayile kwikhompyuter yakho, kubandakanya nezo ziphawulwe njengezifihliweyo, ngokwesiqhelo nguMicrosoft. Ngamanye amaxesha, kuya kufuneka ubone zonke iifayile zakho, nokuba iiWindows zifuna ukuzifihla kuwe.
Utshintsho lwakho lwenzeka kwangoko.
Jonga ulwandiso lwegama lefayile elityhiliweyo.
yeyiphi eyona prilosec okanye nexium
Ngaba i-lexapro ibangela ukulala
Elona chiza lilungileyo leschizophrenia
i-antifungal yomlomo ye-thrush
Iipilisi ezimhlophe ezingama-44 148